Ukuthengiswa kwePhepha kwabaQalayo-Yenza eyona NZUZO! Ngomhla we-2022
Funda ngesiKhokelo soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2022!
Ukuthengiswa kwephepha yinkqubo yokuthenga nokuthengisa iiasethi ngeakhawunti yedemo ebukhoma. Uyakwenza oku ngokusebenzisa umrhwebi okwi-Intanethi ngenjongo yokuphindaphinda imeko zentengiso zehlabathi ngaphandle kokubeka eyakho imali emngciphekweni.
Oku kuluncedo ngenxa yezizathu ezininzi. Umzekelo, iiakhawunti zokurhweba ngephepha zilungile kwabo banamava amancinci endlela yokusebenza kotyalo-mali kwi-Intanethi.
Ngokufanayo, le nkqubo ikwasebenza ukuba ufuna ukuvavanya iindlela ezintsha, okanye ukuba ujonge ukuvavanya ukusebenza kwerobhothi yokuthengisa ngokuzenzekelayo.
Kwisikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2022, sichaza yonke into ekufuneka siyazi malunga neakhawunti yeedemo eziphilayo. Sikunika isikhokelo senyathelo nenyathelo malunga nendlela onokuthi uqalise ngayo ngeqonga lokuthengisa iphepha, kunye nabathengisi abahlanu ababalaseleyo ukwenza oku.
Yintoni ukuThengiswa kwePhepha?
Ngamafutshane, urhwebo lwamaphepha lubhekisa kwinkqubo yokuthenga nokuthengisa izixhobo zemali ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Endaweni yokuba uza kuthengisa ngemali ye-akhawunti yedemo ngokusebenzisa umthengisi okwi-Intanethi. Eyona njongo iphambili kukuvavanya imeko zehlabathi lokwenyani kwindawo engenangozi. Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi ukufumana ukufikelela kwiakhawunti yokuthengisa iphepha.
Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka uvule i-akhawunti yedemo kunye nomrhwebi, oya kuthi akunike ukufikelela kwangoko kwiimarike. Oku kuya kuza ngohlobo lweqonga lokurhweba kwiwebhu onokufikelela kulo kwisikhangeli sakho, okanye isoftware yokuthengisa yedesktop enje MT4/ MT5. Nokuba yeyiphi na indlela, yonke into oyibonayo kwiplatifomu yakho yokuthengisa iphepha iya kuthi ibonakalise okwenzekayo kwiimarike zezemali zokwenyani zehlabathi.
Zithini iinzuzo kunye neengozi zokuthengiswa kwephepha?
Indlela egqibeleleyo yokufunda ukuba indawo yokurhweba kwi-Intanethi isebenza njani
Akukho sidingo sokufaka nayiphi na imali okanye ukubeka emngciphekweni imali yakho
Kukhulu kuvavanyo lweendlela zorhwebo
Funda ukuba zisebenza njani izalathi zobugcisa
Amandla okuvavanya-ukuqhuba inkqubo yorhwebo oluzenzekelayo
Kulungile ukuvavanya abanikezeli beenkonzo zomqondiso
Ukungabinamava kwiziphumo ebezingalindelekanga zokuphulukana nemali
Ungathatha umngcipheko omkhulu kunokuba ubuqhele ukwenza xa urhweba ngemali yephepha
Ngubani oLungele ukuThengiswa kwePhepha?
Sukuyenza impazamo ngayo - amaqonga orhwebo ephepha awanalo nje kubatyali zimali abatsha. Ngokuchasene noko, banikezela ngendlela esebenzayo yokuvavanya uluhlu lweendlela kunye neenkqubo zokurhweba kwindawo engenabungozi.
Apha ngezantsi sidwelisa ezinye zezizathu zokuba kutheni ungafuna ukuqaphela umrhwebi okwi-Intanethi onika isibonelelo seakhawunti yedemo ngokupheleleyo.
Indawo yokuqala ebonakalayo kukuba abo banamava amancinci endlela yokurhweba kwi-Intanethi. Ngokubalulekileyo, ukuba awuzange ubeke okanye uthengise iodolo ngaphambili ngemali yenyani yokwenyani, kungcono kakhulu ukuba uqale ngeakhawunti yokuthengisa yedemo. Ngokwenza njalo, ungafunda ii-ins kunye nokuphuma kwendlela yokuthengisa amaqonga asebenza kwi-Intanethi kwindawo eyi-100% engenabungozi.
Izinto onokuzifunda ngorhwebo lwamaphepha zezi:
Okokuqala nokuphambili, iakhawunti yokurhweba ngephepha iya kukuvumela ukuba ufumane ukuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela esebenza ngayo iodolo yeemarike. Oku kubandakanya yonke into ukusuka ekuthengeni nasekuthengiseni iiodolo, umda wokuyalela, ii-odolo zokuyekiswa, ii-odolo zenzuzo, kunye nee-odolo zokuyeka ilahleko. Ezi ntlobo zeodolo zihlala embindini wentengiso ye-Intanethi- njengoko ivumela umthengisi ukuba azi ukuba ujonge ukufezekisa ntoni.
Nje ukuba uqaphele ukuba zisebenza njani iiodolo zentengiso, kuya kufuneka uchithe ixesha uhlalutya iindlela zentengiso. Oku kuya kukunika elona thuba lilungileyo lokuqonda ukuba izixhobo zihamba njani kwiimarike zezemali.
Iiakhawunti zokurhweba ngephepha zikwalungele nokwakha iindlela zakho zolawulo lomngcipheko. Eli licandelo elibalulekileyo lenkqubo yokurhweba kwi-Intanethi njengoko ii-odolo zakho kufuneka zisoloko zikhuselwa kukuhamba kweentengiso ngesiquphe ngendlela engeyiyo. Abo bangenazo izicwangciso zolawulo lomngcipheko ezaneleyo baya kugxothwa ekuhambeni kwexesha.
Ukuba awukacingi ukuba i sasaza isebenza-kuya kufuneka usebenzise iakhawunti yokuthengisa iphepha. Emva kwayo yonke loo nto, ukusasazeka kunokuba nefuthe elikhulu kumandla akho okwenza inzuzo kurhwebo. Ngapha koko, ukusasazeka kuya kuhlala kutshintsha kulo lonke usuku lokurhweba, ke iakhawunti yedemo iya kubonisa oku kwiimeko zentengiso zehlabathi zangempela.
Ukuxhobisa sisixhobo esisetyenziswa ngabarhwebi abaninzi abanezakhono, kuba sibanika ithuba lokwandisa izikhundla zabo. Ngale nto ithethwayo, inokwandisa iilahleko zakho. Kananjalo, singacebisa ukuvavanya ubungakanani nge-akhawunti yokuthengisa ngephepha ngaphambi kokubeka umngcipheko kwimali yakho. Ngokwenza njalo, uya kubona okuhle kwaye Icala elibi lokuthengisa kumda.
Ngaphezulu kokuba sisixhobo esikhulu se-newbies sokufunda iintambo zokurhweba kwi-Intanethi, iiakhawunti zedemo lukhetho olukhulu xa kufikwa kuvavanyo lomthengisi omtsha. Kungenxa yokuba uya kubona ukuba iqonga lokurhweba lisebenza njani kwindawo yokurhweba ngaphandle kokufaka nayiphi na imali. Ke, ukuba isigaba sokurhweba ngephepha sibuyisela iziphumo ezilungileyo, ungaqhubekeka uvula iakhawunti epheleleyo.
Uhlalutyo lobuchwephesha yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzenze kakuhle ukuba unqwenela ukwenza impumelelo kwiinzame zakho zokurhweba kwi-Intanethi. Kulabo abangaziyo, uhlalutyo lobuchwephesha yinkqubo yokufunda iitshathi. Eyona njongo iphambili kukujonga amaxabiso ezembali, kunye nendlela ezi zinto zihambelana ngayo namaxabiso akhoyo nawangomso.
Ukuze ufezekise oku, kuya kufuneka ufunde ukuba zisebenza njani izalathi zobugcisa. Oku kubandakanya yonke into evela kwi-RSI, MACD, Bollinger Bands, kunye neFibonacci Retracement. Ngelixa ngokuqinisekileyo ungafunda ngcamango Uhlalutyo lobuchwephesha, ekuphela kwendlela yomlilo eqinisekileyo yokuphucula izakhono zakho kukuvavanya uhlalutyo lwakho kwiimeko zehlabathi lokwenyani.
Kwaye yeyiphi indlela engcono yokwenza oko ngaphandle kweakhawunti yokuthengisa iphepha? Ngokubalulekileyo, unokwenza iimpazamo ezininzi njengoko ubona kufanelekile- njengoko ungazukubeka esichengeni isenti enye!
Ukuvavanya amaqhinga amatsha
Masicinge ukuba ungumrhwebi onamava obusoloko uthenga kwaye uthengisa iimali iminyaka eliqela. Ngelixa uphumelele kakuhle, kungafika ixesha apho uthatha isigqibo sokuthatha indlela entsha. Emva kwayo yonke loo nto, iimarike zezemali zisebenza kwishishini elitshintsha rhoqo, ke into esebenzayo izolo ayinakusebenza namhlanje.
Ngale nto engqondweni, ukuba kwaye xa uthatha isigqibo sokuqalisa ukusebenza kwisicwangciso esitsha sokurhweba, uya kufuna ukuvavanya oku ngendlela enobungozi. Indlela efanelekileyo yokwenza oku kukusebenzisa i-akhawunti yokuthengisa iphepha. Oku kuyakuvumela ukuba wenze ii-tweaks kunye nohlengahlengiso njengoko kwaye xa ubona kufanelekile.
Ke, xa uziva ukuba isicwangciso sakho esitsha sikulungele ukuqala ukurhweba kwihlabathi lokwenyani, ungayisebenzisa!
Iimpawu zoThengiso eziThintelweyo
Enye yeenzuzo ezilungileyo zokusebenzisa iakhawunti yokurhweba ngephepha kukuba ikuvumela ukuba uvavanye inkonzo entsha yomqondiso ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Ngokuqinisekileyo, unokufuna ukwenza ifolokhwe encinci ukuze usebenze ngenkonzo yomqondiso kwinyanga yokuqala, kodwa ngaphandle koko, indawo yeakhawunti yeedemo iya kukuvumela ukuba uvavanye iingcebiso ngaphambi kokwenza ukuzibophelela kwexesha elide.
Le yinto thina kwi-2 yokufunda yorhwebo ekhuthaza abafundi bethu. Ngokubalulekileyo, inkonzo yethu yesiginali ye-forex kunye ne-cryptocurrency iza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esimalunga neentsuku ezingama-30. Kananjalo, oku kukunika ixesha elaneleyo lokuvavanya imiqondiso yethu ngeakhawunti yokurhweba ephepheni. Nje ukuba wenze uhlalutyo lwakho, unokuthatha isigqibo sokuba ingaba imiqondiso iyasebenza okanye ayisebenzi kwiinjongo zakho zokurhweba ixesha elide. Kwaye ukuba abenzi njalo - kulungile, cela ukubuyiselwa imali ngokupheleleyo kwaye akubizi nto!
Iinkqubo zoThengiso eziZenzekelayo
Ngamanye amaxesha, iiakhawunti zokurhweba ngephepha zikuvumela ukuba uvavanye urhwebo lwemoto iinkqubo ezinje ngeerobhothi zangaphambili kunye nee-EAs (abaCebisi ngeeNgcali). Ngoku, kuya kufuneka usebenzise i-broker ekwi-Intanethi ekunika ukufikelela kwi-MT4 okanye kwiqonga le-MT5. Ukuba bayayenza, emva koko unokuvula iakhawunti yedemo kwaye ukhuphele isoftware yeMT4 / M5 kwisixhobo sakho.
Emva koko, kuya kufuneka unxibelelanise iirobhothi ezizenzekelayo kunye nesoftware yorhwebo. Yiyo ke-isoftware yokurhweba ngokuzenzekelayo iya kuqhubeka nokuthengisa endaweni yakho. Ngokubalulekileyo, ayinamsebenzi ukuba i-bot ikwenzela imali okanye hayi - njengoko urhweba ngephepha ngeakhawunti yedemo ephilayo! Ukuba kuvela ukuba irobhothi ezenzekelayo ilungile kwinto eyenzayo, emva koko ungatshintshela kwiakhawunti yomrhwebi wehlabathi lokwenyani.
Imingxunya yeeakhawunti yokuthengisa iphepha
Mkhulu njengoko iiakhawunti zokurhweba ngephepha- ziza nenani lemingxunya. Eyona nto iphambili koku yimvakalelo engeyiyo yokhuseleko. Umzekelo, masithi ubusebenzisa iakhawunti yedemo kangangeeveki- kwaye ngaphezulu kwesigaba sovavanyo wenze imbuyekezo ye-45%.
Umrhwebi ongenamava ngokungathandabuzekiyo uya ngqo ngqo kumthengisi wabo, avule iakhawunti yokwenyani yokurhweba, kwaye afake imali. Ndicinga lonto yorhwebo ntengiso Ngumoya opholileyo, baya kuthi emva koko bajonge ukuphinda impumelelo abaye bahlangabezana nayo kusetyenziswa indawo yabo yeakhawunti.
Enyanisweni, isicwangciso esinjalo asiyi kuphela kakuhle. Ngokubalulekileyo, xa usenza urhwebo ngephepha ngemali yedemo, konke kuqinisekile ukuba uya kuthatha umngcipheko ongakhange ube kwimeko yokwenyani yelizwe. Kungenxa yokuba awusoze umngcipheko wokulahleka kwemali xa urhweba ngephepha, ke yonke into oyibonayo kwiscreen iyakhohlisa.
Iziphumo ezibi zoRhwebo
Nokuba ngumrhwebi we-newbie okanye umtyali mali onamava onamava eminyaka phantsi kwebhanti labo - bonke abathengisi baya kudibana neelahleko. Oku kunokuba sisikhundla esichasene nabo, okanye inani leeveki okanye iinyanga kubomvu. Nokuba yeyiphi na indlela, ilahleko ziyinxalenye yesiqendu sotyalo-mali kwi-intanethi.
Ngoku, abo bayenzayo kwindawo yokurhweba bayayazi indlela yokujongana nelahleko. Bafunda nje kwiimpazamo zabo kwaye badlulele kurhwebo olulandelayo. Nangona kunjalo, abatyali zimali abatsha baya kwenza ngokuchaseneyo ngqo. Oko kukuthi, umrhwebi uya kuqala ukwenza izigqibo ezingenangqondo kunye neengozi eziphezulu-ekugqibeleni kubangele ukutshiswa kwe-akhawunti.
Inqaku eliphambili apha kukuba iakhawunti yokurhweba ngephepha ayizukungenisa kwiziphumo ezibi zorhwebo. Ngokuqinisekileyo, uya kuhlala uhlangabezana nelahleko kwindawo yakho yeakhawunti yedemo- kodwa, ayizukuziva ngokufana nokuphulukana nemali yokwenyani. Unoko engqondweni, uya kwazi kuphela ii-ins kunye nokuphuma 'kwezorhwebo ngengqondo' xa sele urhweba ngenkunzi yakho.
Uyikhetha njani iAkhawunti yokuThengisa iphepha?
Ke ngoku ukuba uyazazi zombini izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zokuthengisa iphepha, ngoku kufuneka sixoxe ngenkqubo yokukhetha iqonga.
Ngamakhulu ababoneleli abasebenzayo kwisithuba, ukwazi ukuba yeyiphi i-akhawunti yedemo oza kuyivula kunokuba ngumceli mngeni. Kananjalo, qiniseka ukwenza ukuqaphela izikhokelo ezidweliswe ngezantsi.
Khetha uMthengisi ojolise ekusebenziseni
Njengoko siqaphele kwisikhokelo sethu sonke, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi ukuba unqwenela ukuvula iakhawunti yokuthengisa ngephepha. Kungenxa yokuba uya kube uphinda-phinda iimeko zentengiso zehlabathi. Umzekelo, ngelixa ixabiso le-GBP / i-USD isenokuba yi-1.2200 kumthengisi A, inokuba ingaphezulu kancinci kwi-1.2240 kumthengisi B.
Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka uvule i-akhawunti yedemo kuphela kunye nomrhwebi okwi-Intanethi ukuba ngaba ufuna ukusebenzisa iqonga xa usiya kurhwebo ngemali yokwenyani. Emva kwayo yonke loo nto, akukho ndawo ichitha iiveki ukuvavanya isicwangciso sokurhweba ngephepha kwi-broker, ukuze utshintshe abathengisi kamva. Ukuba uyakwenza oko, unokuqaphela ukuba umrhwebi usebenza ngendlela eyahlukileyo kule ye-akhawunti yakho yedemo.
Iimeko zoRhwebo lweHlabathi zoNene
Ngaphandle kwamathandabuzo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iakhawunti yakho oyikhethileyo yokurhweba ngephepha ibonelela ngeemeko zentengiso zehlabathi. Ukuba ayenzi njalo, iyakoyisa injongo ephambili. Ngokubalulekileyo, nokuba ufuna i-newbie yokufunda ukuba urhwebo lusebenza njani okanye umtyali mali onamava unethemba lokuvavanya ukuqhuba iirobhothi ezintsha-eyona nto iphambili kukuba ufuna ukuphinda-phinda iimeko zentengiso.
Abanye abathengisi abakwi-Intanethi baya kubeka umda kwixesha elinokuthi uthengise ngeakhawunti yedemo. Oku kunembono yokukufumana wenze utshintsho ngeakhawunti yomrhwebi yokwenene. Ngale nto ithethwayo, uyakufuna kwiintsuku ezingama-30 zokugqibela ukuvavanya iqonga, ke qiniseka ukuvavanya ukuba umrhwebi uzimisele ukukunika ixesha elingakanani ngaphambi kokuba iakhawunti yedemo irhoxiswe.
Kuya kufuneka ke uvavanye ukuba yeyiphi ibhalansi iakhawunti yokuthengisa iphepha eza nayo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba unikwa 'imali' eyaneleyo yokuvavanya iindlela zakho. Abanye bababoneleli beeakhawunti zokurhweba ngephepha esincomela ukuba kweli phepha bakunike ibhalansi yokuqala eyi- $ 50,000.
Itshathi Izixhobo Zokufunda
Nje ukuba ugqibe izinto ezisisiseko, kuya kufuneka uphinde uphonononge ukuba zeziphi izixhobo zokufunda ezikwitshathi eziza nephepha lokuthengisa. Iimpawu zobuchwephesha ezinje nge-RSI kunye neMACD zihlala embindini wentengiso ye-Intanethi, ke kubalulekile ukuba unikwe izixhobo eziyimfuneko zokuvavanya iindlela zakho.
Inani elikhethiweyo labarhwebi abakwi-Intanethi bayakukucela ukuba uqhoboshele indlela yokubhatala- nokuba uzimisele ukusebenzisa indawo yeakhawunti yedemo. Nangona umrhwebi enokwenza oku ukubonelela abantu ekuvuleni iiakhawunti ezininzi, sikhusela amaqonga ekucela ukuba uqhoboshele ikhadi lebhanki / lekhredithi. Emva kwayo yonke loo nto, esona sizathu siphambili kurhwebo lwamaphepha kukuvavanya umrhwebi ngaphambi kokwenza ukuzibophelela kwezemali!
Uqala njani ngeakhawunti yokuThengisa iphepha
Ngaba ujonge ukuqala ngeakhawunti yokuthengisa iphepha namhlanje, kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala phi? Apha ngezantsi uyakufumana isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo anokukufumanela iqonga leakhawunti yedemo ngemizuzu!
Inyathelo 1: Khetha uMrhwebi okwi-Intanethi
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukufumana umrhwebi okwi-Intanethi onikezela ngesibonelelo seakhawunti yokuthengisa ngephepha. Kuya kufuneka ujonge uluhlu lwezinye izinto ukumisela ukuba umthengisi okwi-Intanethi ukulungele na okanye hayi. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka ujoyine iqonga lokuthengisa iphepha ukuba unenjongo yokusebenzisa umrhwebi kamva.
Ezinye zezinto ekufuneka ujonge kuzo zezi:
Zeziphi iiasethi umrhwebi akuvumela ukuba urhwebe ngazo?
Ngaba ukhuphiswano kangakanani nomrhwebi xa kufikwa ekusasazeni, kwimirhumo nakwiikhomishini?
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhaswa ngumrhwebi?
Zeziphi iilayisensi zomthetho ezibanjwa ngumthengisi?
Ukuba ujonge ukubandakanyeka kurhwebo oluzenzekelayo, ngaba umrhwebi uyayixhasa iMT4 / 5?
Ngaba umthengisi unikezela ngenkxaso yabathengi abaphezulu?
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda umrhwebi okwi-intanethi ngokwakho, uya kufumanisa ababoneleli abahlanu abanamaphepha aphezulu abathengisa iphepha abadweliswe esiphelweni seli phepha.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti yeDemo
Nje ukuba ufumane umthengisi ofanelekileyo kwi-Intanethi, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Oku kuyakufuna ukuba ufake ulwazi olusisiseko lomntu ukuze umrhwebi azi ukuba ungubani. Sukuba nexhala- awunyanzelekanga ukuba ubeke nayiphi na imali- okanye udibanise indlela yokubhatala ngaloo nto. Endaweni yoko, kukuthintela abasebenzisi ekuvuleni iiakhawunti ezininzi zokuthengisa iphepha.
Kananjalo, kuya kufuneka ubonelele nge:
Inyathelo 3: Khetha iqonga lokuthengisa
Nje ukuba uvule iakhawunti kunye nomthengisi wakho omkhethileyo, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba leliphi iqonga lokurhweba elisebenza ngcono kuwe. Kwiimeko ezininzi, uya kukhetha kwiqonga lokuthengisa kwiwebhu elikuvumela ukuba ufikelele kwindawo yedemo ngesikhangeli sakho, okanye unokukhuphela iqonga elifana neMT4 / 5. Ukuba ukhetha okokugqibela, oku kuyakuvumela ukuba uvavanye iindlela zakho ze-EA okanye iirobhothi ezizenzekelayo!
Inyathelo 4: Qalisa ukuthengisa iphepha
Nje ukuba ulayishe iqonga lakho lokurhweba olithandayo, kuya kufuneka ubone ibhalansi 'yedummy'. Ngoku ukhululekile ukubeka ukuthenga nokuthengisa iiodolo. Njengokuba usenza kwaye xa usenza, imali iya kuncitshiswa kwimali eseleyo yokuthengisa iphepha. Kuya kufuneka uzame ukurhweba ngokungathi wenza njalo ngemali yehlabathi yokwenyani.
Sikwacebisa ukugcina iithebhu kubalo lwembali yakho. Oku kuyakucacisa ukuba inzuzo kunye nelahleko yakho ingakanani, nto leyo ibaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuba ingaba iindlela zakho zokurhweba ziyasebenza na.
Inyathelo 5: Nyusela kwiAkhawunti yoRhwebo lwaBantu
Ukuba, kwaye kuphela ukuba 'ukuba' ufumanisa ukuba izicwangciso zakho zorhwebo ziyasebenza, emva koko unokujonga ukuphuculwa kweakhawunti yomthengisi ngokupheleleyo. Iindaba ezimnandi zezokuba sele ubonelele ngolwazi lwakho, ke konke okufuneka ukwenze kukufaka i-ID kunye nobungqina bedilesi Le yeyona nto ifunekayo kubarhwebi abakwi-intanethi abalawulwayo, njengoko amaqonga kufuneka aqinisekise ukuba bahlala bethobela imithetho echasene nemali.
Emva koko, kuya kufuneka ubeke imali kwi-debit / kwikhadi letyala, i-e-wallet, okanye kwiakhawunti yebhanki- kwaye ulungile ukuba uza kuhamba! Ngale nto ithethwayo, ukuba ufumanisa ukuba iindlela zakho zokurhweba aziphumeleli kwimeko yokwenyani yehlabathi, unokufuna ukuqaphela ukubuyela kwiakhawunti yakho yokuthengisa iphepha. Oku kuyakuvumela ukuba uvavanye ukuba yintoni kuhamba iphosakele ngaphandle kokulahlekelwa yenye imali.
Abarhwebi abaziiPhepha eziPhambili ze2022
Awunalo ixesha lokufumana i-akhawunti yokurhweba ephepheni ephezulu? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uya kufumana abaxhasi bethu be-akhawunti yokuthengisa iphepha abahlanu be-2022.
Umboneleli ngamnye ngumrhwebi olawulwayo onikezela iimfumba zeeklasi zeeasethi- kwaye onke amaziko okurhweba ngephepha abonisa oko kweemarike zezemali zokwenyani zifana nokuthanda.
1. I-AVATrade- 2 x $ 200 yeBhonasi yeBhanki eyamkelekileyo
2. I-Capital.com - iiKhomishini zeZero kunye nokusasazeka kwe-Ultra-Low
I-Capital.com yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB elawulwa yi-intanethi ye-intanethi enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Zonke ziluhlobo lweCFDs - oku kubandakanya i-stocks, indices kunye nempahla. Awuyi kuhlawula nepeni enye kwikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqine kakhulu. Izibonelelo zoxhaso nazo ziyafumaneka - zihambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Kwakhona, oku kuma ngo-1: 30 kwii-majors kunye ne-1: 20 kubantwana nakwizinto ezingaqhelekanga. Ukuba usekwe ngaphandle kweYurophu okanye uthathwa njengomntu onobuchule kubathengi, uya kufumana imida engaphezulu. Ukufumana imali kwiCapital.com kukwayimeko yomoya-njengoko iqonga lixhasa amakhadi etyala / amakhadi etyala, ii-e-wallets, kunye nokudluliselwa kweakhawunti yebhanki. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, ungaqala nge- $ 20 / $ nje.
Iikomishini zeZero kuzo zonke iiasethi
I-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB zilawulwa
Ayiboneleli ngesabelo sendabuko
I-75.26% yee-akhawunti zokuthengisa ezithengisayo zilahlekelwa yimali xa zisasazeka ukubheja kunye / okanye ukuthengisa ii-CFD kunye nalo mnikezeli. Kuya kufuneka uqwalasele ukuba unako na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali yakho.
Isishwankathelo, iiakhawunti zokurhweba ngephepha zilungele abatyali mali bazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ukuba usaqala kwilizwe lezorhwebo kwi-Intanethi, indawo yedemo iya kukuvumela ukuba ufunde iintambo ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho. Kwelinye icala lesiphelo, amaqonga okurhweba ngephepha alungile kuvavanyo lweendlela zorhwebo eziphambili, kunye nee-EAs kunye neerobhothi ezizenzekelayo.
Ukuba ulungele ukuba uhambo lwakho lokurhweba ngephepha luqale namhlanje, singacebisa ukuba siqwalasele i-Crypto Rocket yethu yomrhwebi. Iqonga elilawulwayo linikezela ngeakhawunti yeedemo ezibonisa imeko yeemarike zehlabathi-ezibalulekileyo. Eyona nto ilunge kakhulu, akukho mfuneko yokukhuphela nayiphi na isoftware- njengoko yonke into inokufikeleleka ngeqonga lomthengisi wewebhu.
Yintoni ukurhweba ngephepha?
Ukuthengiswa kwephepha kubhekisa kwinkqubo yokuthengisa ngeakhawunti yedemo. Uya kufumana amava okurhweba okwenyani ngaphandle kokufuna ukubeka emngciphekweni imali yakho.
Ngaba kufuneka ndifake imali ukuze ndifumane iakhawunti yokuthengisa ngephepha?
Kwiimeko ezininzi awudingi ukufaka nayiphi na imali ukuze ufumane ukufikelela kwiakhawunti yokuthengisa iphepha. Endaweni yoko, kufuneka ubhalise iakhawunti kumthengisi okhethiweyo.
Ngaba ungayiphumelela imali ngeakhawunti yorhwebo ngephepha
Hayi, ukuthengiswa kwamaphepha yinkqubo nje yokuthenga kunye nokuthengisa iiasethi ngemali 'yephepha'. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba uthengisa ngemali engeyiyo kwaye ke- naziphi na iinzuzo ozenzayo aziyonyani!
Ndingasifaka isicelo xa kuthengiswa iphepha
Ewe, iiakhawunti zokurhweba ngephepha zibonisa ukuba ziiakhawunti zokwenene zabarhwebi. Kananjalo, uya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke izixhobo ezifanayo ngokungathi uburhweba ngemali yokwenyani.
Kwenzeka ntoni xa iiakhawunti zam zokurhweba ngephepha ziye kwi-zero?
Unako ukuhlaziya kwakhona ibhalansi ukuba uye kwi-zero. Ukuba oku kuyenzeka, sisalathiso somlilo esiqinisekileyo sokuba awukakulungeli ukurhweba ngemali yokwenyani!
Ndiyiphucula njani iakhawunti yokuthengisa iphepha ndiye kwiakhawunti yokwenyani?
Ukuba sele ubonelele ngeenkcukacha zakho kubroker, kuya kufuneka ulayishe enye i-ID kunye nedipozithi mali. Emva koko, ungaqala ukurhweba ngemali yokwenyani.
Ngaba ndingayivula iakhawunti yedemo ye-MT4 ngaphandle komrhwebi?
Hayi, ungasebenzisa i-MT4 kuphela ukuba une-akhawunti yomrhwebi.